यी उपाय अपनाए नारायणघाट–मुग्लिन सडकखण्डको जाम कम गर्न सकिन्छ - Engineers Post
यी उपाय अपनाए नारायणघाट–मुग्लिन सडकखण्डको जाम कम गर्न सकिन्छ
ई. नरेशमान शाक्यJuly 5, 2021
चाहे वर्षायाम् होस् या हिउँदयाम, मुग्लिन सडकखण्ड हुँदै यात्रा गर्ने यात्रुहरूले सधैंभर झेल्ने सबैभन्दा मुख्य समस्या हो, जाम । पृथ्वी राजमार्गअन्तर्गत पर्ने काठमाडौंदेखि चितवनसम्म जोड्ने मुग्लिन सडकखण्डमा विभिन्न कारण हुने ट्राफिक जामले यात्रुहरू, मालबाहक गाडीहरूलगायत सबैले सास्ती बेहोर्ने गर्छन् ।
किन हुन्छ मुग्लिन सडकखण्ड अवरुद्ध
मुग्लिन सडकखण्डमा सधैभर जाम हुनुका विभिन्न कारण छन् । यसका केही मुख्य कारण हुन्, पहिरो, ट्राफिक व्यवस्थापनको कमी, सडक दुर्घटना, सडकको छेउछाउँमा थापिएका पसल, वर्क सपहरू आदि ।
पहिरोका कारण हुने जामलाई सहजै नियन्त्रण गर्न सकिँदैन । धेरै वर्षात्पछि पहिरो जान्छ र जाम हुन्छ । पहिरोले सडक पूरै अवरोध भएर लामो समयसम्म जाम भएको खण्डमा चालकहरू लेन मिचेर तथा ओभर टेक गरेर अघि बढ्न खोज्छन् । एकातिरको बाटो खाली हुनेबित्तिकै अर्कोपट्टिबाट गाडी अघि बढ्न खोज्छन् । जसका कारण झन् ठूलो जाम भइदिन्छ । नारायणघाट–मुग्लिन सडकखण्डको मुख्य समस्या भनेकै लेन अनुशासन पालना नगर्नु पनि हो ।
शाखा सडकहरूका कारण पनि ठूलो जाम हुने गर्छ । कतिपय ठाउँमा भौगर्भिक कारणले पनि शाखा सडकहरूमा जाम हुने गर्छ । जस्तो मलेखुमा शाखा सडकको मुख्य जक्सनमा स्थानीयहरूले होटल, पसल, सर्भिस सेन्टर र अन्य कार्यालयहरू खोलिदिन्छन् । सडक छेउमै गाडीमा लोड अनलोड गर्ने गर्छन् । जसले गर्दा जाम हुने हुन्छ ।
सडक दुर्घटना पनि अर्को कारण हो । सडक साँघुरो र मोडहरू धेरै छन् । यस सडकखण्डमा गाडी दुर्घटना हुने वित्तिकै मानिसहरूले चक्का जाम गर्छन् । त्यसको असर दिनभर पर्छ र जाम हुन्छ । जाम खुले पनि गाडीहरु पास हुन समय लाग्छ । कहिलेकाहीँ सडकको बीचमा पुगेपछि ठूला गाडीहरू बिग्रन्छन् र गाडी हटाउने उपकरण नहुँदा जाम हुन्छ ।
त्यसैगरी अर्को मुख्य कारण भनेको सडक छेउमा सर्भिस सेन्टरहरू स्थापना गरिएका हुन्छन् । सर्भिस सेन्टरमा गाडी रोक्दा पनि सडक जाम हुने गर्छ । सडकको क्षमताभन्दा बढी सवारीसाधनहरू चल्ने हुँदा पनि मुग्लिन सडकखण्डमा जाम धेरै हुने गर्छ ।
जामको समस्या समाधानका विभिन्न दीर्घकालीन र तत्कालीन उपाय अपनाउन सकिन्छ । यदि विभिन्न उपाय अपनाउने हो र माथिका कारणहरूको समाधान खोज्ने हो भने मुग्लिन सडकखण्डको जाम कम गर्न सकिन्छ । त्यसैले समस्या समाधानका निम्न उपायहरू अपनाउनुपर्छ ः
पहिरो आएपछि कम जाम गर्न हामीले एक लेन खोल्ने सवारी जामलाई कम गर्न सकिन्छ । यो सामान्य अभ्यास हो जुन सधैं गरिन्छ । तर, एक लेन सडक खोल्दैमा पुरै जाम भने कम हँुदैन ।
पहिरो कम गर्नका निम्ती हामीले सर्वप्रथम पहिरो सम्बन्धी व्यवस्थापनका कार्यक्रम अघि बढाउनुपर्ने हुन्छ । पहिरो नियन्त्रण आफंैमा ‘स्किलफुल’ कार्य हो । कुन क्षेत्रमा पहिरो जान सक्छ र कसरी रोकथाम गर्न सकिन्छ भन्नेबारे पहिल्यै अध्ययन, पहिरो पहिचान गर्न र समस्या समाधानको बाटो पत्ता लगाउन सक्यौं भने पहिरो रोकथाम तथा व्यस्थापन गर्न सकिन्छ । र, उक्त सडकखण्डमा हुने जाम कम गर्न सकिन्छ ।
पहिरो रोकथाम र व्यवस्थापनमा आकस्मिक कार्य योजनामार्फत सवारी जाम कम गर्न सकिन्छ । जुन कतिपय ठाउँमा सडक विभागले गर्दै आएको छ । पहिरो आउने सम्भावना भएका क्षेत्रमा हेभी मेसिनहरु राखेको हुन्छ । र पुराना तथ्यांकका आधारमा यो ठाउँमा पहिरो आउन सक्छ भन्नेबारे अनुमान गर्न सतर्क गराउन यस्ताखाले मेसिनहरू राखिएका हुन्छन् । यस्ता मेसिनहरू पृथ्वी राजमार्गको गजुरे, नौबिसे, मुग्लिनमा जडान गरिएको छ । यस्ता विधिले पनि जाम पूर्ण नभए पनि आंशिक रूपमा कम गर्न मद्दत गर्छ । समग्रमा पहिरो नै कम गर्ने उपायतर्फ लाग्न सकियो भने जामको समस्यालाई दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्न सकिन्छ । यसो गर्न स्किल चाहिने, लामो समय र पैसा बढी खर्च हुने भएकोले चुनौतीपूर्ण छ तर समाधान भने प्रभावकारी र दीर्घकालीन हुन्छ ।
सामान्यतयाः अरूबेला पनि चालकहरूले ओभर टेक गर्ने र लेन मिच्ने गर्छन् । एकछिन जाम भए पनि चालकले ट्राफिकको आँखा छल्ने गर्छन् । अर्को लेनमा जानेबित्तिकै जाम झनै लम्बिन्छ । यसलाई पनि घटाउन सकिन्छ ।
यदि हामीले लेन अनुशासनलाई राम्रोसँग पालना गर्न सक्यौं र लेन उल्लंघन गर्ने र ओभर टेक गर्नेलाई कारबाही गर्ने कडा नियम लागू गर्न सक्यौं भने मुग्लिन सडकखण्डको जाम कम गर्न सकिन्छ । यो उपाय सबैतिर सम्भव नभए पनि मोडहरू र साँघुरो सडक भएको स्थानमा ओभर टेक र लेन मिच्ने काम नगर्ने हो भने पनि तत्कालीन समाधान निकाल्न सकिन्छ । यसको बानी बसाल्न सकेमा यसले दीर्घकालीन रूपमा पनि जाम घटाउन सकिन्छ ।
शाखा सडकमा स्पेस
शाखा सडकहरूमा जुन गन्तव्यबाट गाडी आउँछन् । त्यहाँ ओभर ल्याप गर्न सकेमा जाम कम गर्न सकिन्छ । भौगर्भिक कारण शाखा सडकहरूमा जाम कम गर्न नसकिए पनि सडकबाट आउने गाडीहरूको लागि स्पेस र जक्सन व्यवस्थापन गर्न सकियो भने जाम कम गर्न सकिन्छ । जक्सनमा खोलिने होटल, पसलहरू र कार्यालयहरू पनि विकासका अपरिहार्य हुन् । तर, सडकको छेउमै नखोलेर सडकभन्दा केही दूरीमा पसल तथा कार्यालयहरू खोल्ने हो भने साना ठूला गाडीहरू सहजै पास हुन्छन् । यसले जामम हुन्छ । जक्सनमै लोड अनलोड गर्ने कार्यलाई पनि सडकभन्दा अलिक टाढा गर्ने हो भने पनि जाम कम हुन सक्छ ।
स्थानीय सरकारको पहलमा, सचेतनामूलक कार्यक्रममार्फत, सडकको छेउमै होटेल बनाउने, पसल खोल्ने चलन कम गर्नुपर्छ । बनाउनै परेमा सडकभन्दा पर तथा हिल साइडतिर सर्भिस सेन्टर बनाएर व्यवस्थित गर्ने हो भने जाम कम गर्न सकिन्छ । सर्भिस सेन्टरमा गाडि मर्मत, पार्किङ, रेस्टुरेन्ट, पसलहरू स्थापना गर्न सकिन्छ । हरेक आधा घण्टाको दूरीमा यस्ताखाले सर्भिस सेन्टरहरू स्थापना गर्ने हो भने सडकछेउको जाम स्वतः कम गर्न सकिन्छ । सर्भिस सेन्टरको अभ्यास हाल नागढुंगा सडकखण्डमा अवधारणा अघि सारिएको छ ।
सडकखण्डमा जाम गर्न हामीले कडा नियम र रणनीति अपनाउनुपर्छ । सरकार स्वयंले सकेन भने निजी र स्थानीय क्षेत्रलाई जिम्मा दिनुपर्छ । तब मात्र जाम कम गर्न सकिन्छ ।
सडकको क्षमताभन्दा बढी सवारी चल्ने हँुदा यसको अध्ययन तथा अनुसन्धानतर्फ पनि हामी लाग्नुपर्छ । सडकमा विगतमा २ देखि ३ हजार गाडीहरू गुड््थे भने अहिले १० हजारभन्दा बढी गुड्छन् । जुन सडकको क्षमताले पनि नभ्याएको जस्तो देखिन्छ । यसको अध्ययन गरेर सम्भावित समाधान निकाल्न सकिन्छ । सोहीअनुसार सडक विस्तार गर्न सकिन्छ र जाम न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ ।
दुर्घटनाका कारण हुने चक्का जाम र बार्गेनिङका गतिविधि कम गराउनुपर्छ । दुर्घटनापछि प्रहरी पुग्न र प्रक्रिया बन्नै समय लाग्छ । स्थानीयहरूले चक्का जामको गतिविधि सिर्जना गर्नुभएन । यस्ता सामाजिक कारण हुने जामहरूलाई पनि गर्ने पहल गर्नुपर्छ । दुर्घटनापछि हुने चक्का जाम हटाउन स्थानीय प्रशासन, क्लब, युवाहरू सबैलाई परिचालन गर्ने र सचेतना मुलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ । यो तत्कालीन समाधान हो ।
यतिबेला सडकमा गाडी दुर्घटना हुनेबित्तिकै प्रहरी आउने समयसम्म कुर्नुपर्छ, प्रहरी पुगेपछि त्यहाँ अन्य प्रक्रिया हुन्छन्, गाडी हटाउन उत्तिकै समय लाग्छ । सडकबाट गाडी हटाउने मेसिन ल्याउनै घण्टौं समय लाग्छ । यसको समाधानमा सडक दुर्घटना भइहालेमा गाडीलाई तत्काल हटाउन राजमार्ग ट्राफिकहरूसँग पर्याप्त मात्रामा क्रेनहरू हुनुपर्छ ता कि ट्राफिकले गाडीलाई सडकबाट तत्काल हटाएर जाम कम गर्न सकियोस् ।
यस्ता उपायहरू अपनाउन सकिएमा दीर्घकालीन समाधान निकाल्न सकिन्छ र मुग्लिन सडकखण्डमा हुने सवारी जामबाट बच्न सकिन्छ ।
(नरेशमान शाक्य सडक विभागका सुपरिडेन्ट हुन् । हाल उनी नागढुंगा सुरुङमार्गमा मुख्य इन्जिनियरका रूपमा कार्यरत छन् । यो लेख इन्जिनियर्स पोस्टकर्मी अस्मिता खड्काले ई. शाक्यसँग गरेको कुराकानीका आधारमा तयार पारिएको हो ।)
#ई._नरेशमान_शाक्य #नागढुंगा_सुरुङमार्ग #नारायणघाट–मुग्लिन_सडकखण्ड
Bridge Failures in Nepal: Diagnosis and Solutions for Design
How to improve yourself as an Engineer ?
कस्तो छ नेपालमा इन्जिनियरको वर्तमान अवस्था ?
नारायणगढ–मुग्लिङ सडक खण्डमा नयाँ किसिमबाट पहाडको स्लोप काट्नुपर्छ